Rut 1 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
1 O wee ruo n’oge ọ bụ ndị ikpe+ na-ekpe ikpe na ụnwụ+ dara n’ala Izrel, otu nwoke wee si na Betlehem+ nke dị na Juda gawa n’ala Moab+ ka ha biri dị ka ọbịa, ya na nwunye ya na ụmụ ya ndị ikom abụọ. 2 Aha nwoke ahụ bụ Elimelek, aha nwunye ya bụ Neomi, aha ụmụ ya ndị ikom abụọ bụ Malọn na Kilịọn, ha bụ ndị Efrata+ si Betlehem nke dị na Juda. E mesịa, ha rutere n’ala Moab wee biri n’ebe ahụ. 3 Ka oge na-aga, Elimelek bụ́ di Neomi nwụrụ, o wee fọdụzie ya na ụmụ ya ndị ikom abụọ. 4 E mesịa, ndị ikom ahụ lụrụ nwaanyị, bụ́ ndị inyom Moab.+ Aha otu bụ Ọpa, aha nke ọzọ abụrụ Rut.+ Ha wee biri n’ebe ahụ ruo ihe dị ka afọ iri. 5 Ka oge na-aga, ha abụọ, Malọn na Kilịọn, nwụkwara, nwaanyị ahụ wee gbara aka ụmụ ya abụọ, gbarakwa aka di. 6 O wee bilie, ya na ndị nwunye ụmụ ya, wee si n’ala Moab lawa, n’ihi na ọ nọwo n’ala Moab nụ na Jehova echewo ihu ya n’ebe ndị ya nọ+ site n’inye ha nri.+ 7 O wee si n’ebe ahụ o biri lawa,+ ya na ndị nwunye ụmụ ya abụọ, ha nọ na-aga n’ụzọ ka ha laghachi n’ala Juda. 8 N’ikpeazụ, Neomi gwara ndị nwunye ụmụ ya abụọ, sị: “Lawanụ, laghachinụ, onye nke ọ bụla n’ụlọ nne ya. Ka Jehova gosi unu obiọma,*+ dị nnọọ ka unu gosiri ya ndị ikom ahụ nwụrụ anwụ nakwa mụ onwe m.+ 9 Ka Jehova nye unu onyinye,+ ka onye ọ bụla n’ime unu nwetakwa ebe izu ike+ n’ụlọ di ya.” O wee susuo ha ọnụ,+ ha wee malite ịkwa ákwá n’olu dara ụda. 10 Ha wee na-asị ya: “Ee e, anyị ga-eso gị laghachikwuru ndị gị.”+ 11 Ma Neomi sịrị: “Laghachinụ, ụmụ m. Gịnị mere unu ga-eji soro m? M̀ ka nwere ụmụ nwoke n’afọ m, hà ga-aghọ di unu?+ 12 Laghachinụ, ụmụ m, lawanụ, n’ihi na emewo m agadi nke ukwuu ịlụ di. M sịgodị na m nwere olileanya na m ga-alụ di n’abalị a nakwa na m ga-amụrịrị ụmụ ndị ikom,+ 13 ùnu ga-anọ na-eche ha ruo mgbe ha tolitere? Ùnu ga-anọrọ n’alụghị di n’ihi ha? Ee e, ụmụ m, n’ihi na ọ na-ewute m nke ukwuu n’ihi unu, na Jehova esetịpụwo aka ya megide m.”+ 14 Ha wee bewe ákwá ọzọ n’olu dara ụda, e mesịa, Ọpa susuru nne di ya ọnụ. Ma Rut rapaara ya n’ahụ́.+ 15 O wee sị: “Lee! Nwunye nwanne di gị nke di ya nwụrụ alakwuruwo ndị ya na chi ya.+ Soro nwunye nwanne di gị lawa.”+ 16 Rut wee sị: “Arịọla m ka m hapụ gị, ka m kwụsị iso gị; n’ihi na ebe ị gara ka m ga-aga, ebe ị ga-arahụ ka m ga-arahụ.+ Ndị gị ga-abụ ndị m,+ Chineke gị ga-abụkwa Chineke m.+ 17 Ebe ị nwụrụ ka m ga-anwụ,+ ọ bụkwa n’ebe ahụ ka a ga-eli m. Ka Jehova mee m otú a, ka ọ tụkwasịkwa ihe+ na ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ọnwụ ga-ekewa mụ na gị.” 18 Mgbe ọ chọpụtara na o kpebisiri ike iso ya,+ ọ kwụsịrị ịsị ya lawa. 19 Ha abụọ wee na-aga ruo mgbe ha rutere Betlehem.+ O wee ruo na ngwa ngwa ha batara Betlehem, obodo ahụ dum malitere ịgba ghara ghara n’ihi ha,+ ndị inyom nọkwa na-asị: “Onye a ọ̀ bụ Neomi?”+ 20 Ọ na-agwakwa ndị inyom ahụ, sị: “Unu akpọla m Neomi. Kpọwanụ m Mera, n’ihi na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile+ emewo m ihe obi ilu dị ukwuu.+ 21 Aka m juru eju mgbe m pụrụ,+ ma Jehova emewo ka m gbara aka lọta.+ Gịnị mere unu ji akpọ m Neomi, ebe ọ bụ na Jehova ewedawo m ala,+ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile akpatawokwara m ọdachi?”+ 22 Otú a ka Neomi si lọta, Rut, nwaanyị Moab, bụ́ nwunye nwa ya, so ya mgbe o si n’ala Moab na-alọta;+ ha wee rute Betlehem+ n’oge a malitere iwe ọka bali n’ubi.+